ဆေးရုံတဈခုရဲ့ ပေါ့ဆမှုကွောငျ့ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ တူလေးအကွောငျး ပွောပွလာ – Myanmar Media
ဆေးရုံဆို တာ လူနာတှေ ကို သခြော စမျးသတျ ပီးစတျခပြီဆိုမှ ပွနျလှတျ စိတျမခရြငျ ဆေးရုံတငျသငျ့တဲ့နရောပါ အခုတော့ မနကျ၂နာရီလောကျက(…..)က‌‌လေးဆေးရုံကို အခကျခဲတှကွေားတညျးက တူလေးအသကျ ကို ကယျခငျြလို့ ဆေးရုံသှားပွတယျ
(…)ဆေးရုံရောကျတော့ ကလေးကို တဈခကျြလေးတောငျ စမျးသတျမူ့မလုပျပဲ မေးခငျြတာတှမေေး ဖွဈကွောငျးအကုနျပွောပွတော့ ရိုးရိုးဖြားတာတဲ့
မနကျ ၂နာလောကျကို ရခြေိုးပေးပီး အဲကှနျးဖှငျ့လိုကျပြောကျသှားမယျတဲ့ စမျးသတျမူ့မပါပဲ ပါးစပျက နေ ပွောတယျ ပီးတော့ စမျးသတျစဈဆေးခ ၁၈၀၀၀ရှငျးပေးလိုကျရတယျ
အိမျရောကျတော့ ကလေးက အခွနေေ မဟနျတော့တာနဲ့ မနကျထိ တောငျ့ခံခိုငျးပီး ရနျကငျး ကလေးဆေးရုံ ကို အရောကျတငျတော့ တာဝနျကဆြရာဆရာမတှေ က ကလေး ကို အသညျးသနျကယျနရေပီ နောကျဆုံး အဖွေ က ညတောငျမကြျောတော့ဘူး တဲ့
ညထိအောငျ တောငျ မနရေပါဘူး နလေ့ညျ ၃နာရီနဲ့ ၄၅မိနဈမှာတူလေးဆုံးသှားတယျအဓိက (….)ဆေးရုံကသာ သခြောစမျးသတျပီး ဆေးရုံမှာ တငျခိုငျးပီးကုပေးရငျ ကလေးမသဘေူး လို့ ရနျကငျး ကလေးဆေးရုံက ဆရာဝနျတိုငျးပွောတယျ
(…)ဆေးရုံငှသော ကွညျ့ပီး ကုတဲ့ဆေးရုံ နငျတို့ဆေးရုံက ပညာမပွညျ့ဝတဲ့ ဆရာဝနျတှေ သာ ဆကျရှိနရေငျ ကလေးမိဘတိုငျးငှကေုနျ ပီးသားသမီးအသကျတှေ ဆုံးရူံးရမှာပဲ ငါ့တူလေးလို အဖွဈမြိုးနဲ့ ကွုံဖူးသူတှေ နငျတို့ဆေးရုံမှာ ဒုနဲ့ဒေးပဲ
နငျတို့ ဆေးရုံထောငျတဲ့ founder ရယျ နငျတို့ဆရာဝနျဆရာဝနျမတှေ နပျဈတှေ ဆေးရုံးဝနျထမျးတှေ အားလုံး ငါ့တူလေး လကျလှတျစပယျပေးလိုကျရတဲ့ အသကျမြိုးလို နငျတို့ အားလုံးပျေါ တနျပွနျ့မူ့မကပြါစနေဲ့…
ဆိုပွီး နောကျလူတှေ မဖွဈသငျ့တာ အခြိနျမလှနျခငျ အခြိနျမီ ကုသ နိုငျစရေနျ မြှဝထေားတာကို ပွနျလညျ တငျပွလိုကျပါတယျ။
ဆေးရုံတစ်ခုရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ တူလေးအကြောင်း ပြောပြလာ
ဆေးရုံဆို တာ လူနာတွေ ကို သေချာ စမ်းသတ် ပီးစတ်ချပီဆိုမှ ပြန်လွတ် စိတ်မချရင် ဆေးရုံတင်သင့်တဲ့နေရာပါ အခုတော့ မနက်၂နာရီလောက်က(…..)ကလေးဆေးရုံကို အခက်ခဲတွေကြားတည်းက တူလေးအသက် ကို ကယ်ချင်လို့ ဆေးရုံသွားပြတယ်
(…)ဆေးရုံရောက်တော့ ကလေးကို တစ်ချက်လေးတောင် စမ်းသတ်မူ့မလုပ်ပဲ မေးချင်တာတွေမေး ဖြစ်ကြောင်းအကုန်ပြောပြတော့ ရိုးရိုးဖျားတာတဲ့
မနက် ၂နာလောက်ကို ရေချိုးပေးပီး အဲကွန်းဖွင့်လိုက်ပျောက်သွားမယ်တဲ့ စမ်းသတ်မူ့မပါပဲ ပါးစပ်က နေ ပြောတယ် ပီးတော့ စမ်းသတ်စစ်ဆေးခ ၁၈၀၀၀ရှင်းပေးလိုက်ရတယ်
အိမ်ရောက်တော့ ကလေးက အခြေနေ မဟန်တော့တာနဲ့ မနက်ထိ တောင့်ခံခိုင်းပီး ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံ ကို အရောက်တင်တော့ တာဝန်ကျဆရာဆရာမတွေ က ကလေး ကို အသည်းသန်ကယ်နေရပီ နောက်ဆုံး အဖြေ က ညတောင်မကျော်တော့ဘူး တဲ့
ညထိအောင် တောင် မနေရပါဘူး နေ့လည် ၃နာရီနဲ့ ၄၅မိနစ်မှာတူလေးဆုံးသွားတယ်အဓိက (….)ဆေးရုံကသာ သေချာစမ်းသတ်ပီး ဆေးရုံမှာ တင်ခိုင်းပီးကုပေးရင် ကလေးမသေဘူး လို့ ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံက ဆရာဝန်တိုင်းပြောတယ်
(…)ဆေးရုံငွေသာ ကြည့်ပီး ကုတဲ့ဆေးရုံ နင်တို့ဆေးရုံက ပညာမပြည့်ဝတဲ့ ဆရာဝန်တွေ သာ ဆက်ရှိနေရင် ကလေးမိဘတိုင်းငွေကုန် ပီးသားသမီးအသက်တွေ ဆုံးရူံးရမှာပဲ ငါ့တူလေးလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံဖူးသူတွေ နင်တို့ဆေးရုံမှာ ဒုနဲ့ဒေးပဲ
နင်တို့ ဆေးရုံထောင်တဲ့ founder ရယ် နင်တို့ဆရာဝန်ဆရာဝန်မတွေ နပ်စ်တွေ ဆေးရုံးဝန်ထမ်းတွေ အားလုံး ငါ့တူလေး လက်လွတ်စပယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ အသက်မျိုးလို နင်တို့ အားလုံးပေါ် တန်ပြန့်မူ့မကျပါစေနဲ့…
ဆိုပြီး နောက်လူတွေ မဖြစ်သင့်တာ အချိန်မလွန်ခင် အချိန်မီ ကုသ နိုင်စေရန် မျှဝေထားတာကို ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Tagsဆေးရုံတဈခုရဲ့ ပေါ့ဆမှုကွောငျ့ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ တူလေးအကွောငျး ပွောပွလာ